Badmaax Yamani ah oo ku biiray Somali horey loogu xukumay Xabsi Daa’in – SBC
Badmaax Yamani ah oo ku biiray Somali horey loogu xukumay Xabsi Daa’in
Maxkamad ku taala Gobolka Norfolk ee wadanka Mareykanka ayaa xukun xabsi daa’in ah ku riday Muwaadin Yemeni ah oo lagu magacaabo Mounir Ali oo ahaa mulkiilaha dooni kaluumeysi oo ay burcad badeed Soomaali ah ku geysteen Afduubka iyo dilka Muwaadiniin Mareykan ah.
Bishii November ee sannadkii tagey ayay ahayd markii koox Cali iyo Koox soomaali ah ay Doonidiisa ku weeraraeen Dalxiisayaal afar ah kuwaasi oo dhalashadoodu tahay mareykan kuwaasi oo markii danbe ay toogteen qafaalatada Soomaalida.
Badmaaxan u dhashay wadanka Yemen oo iminka ku biiraya koox soomaali ah oo dhawaan wadanka mareykanka lagu xukumay kuwaasi oo loo haysto Eedeymaha iyo dilka Dadka Mareykanka.
Mounir Ali waxaa uu maxkamada horteeda ka qirtay inuu falkan ka xunyahay isaga oo si aad ah ugu dooday in Burcad badeeda Soomaalida ay doontiisa iyo isagaba xoog ku haysteen Muddo Saddex bilood ah isaga oo sheegay in markii danbe ay sii deyn doonan afduubkan ka dib.
Ninkani Yemeniga ah ee mareykanka ku xiran waxaa uu sheegay in markii ay bilaabatay rasasta dhexmartay Burcad badeeda iyo askarta mareykanka uu ku jiray qeybta cunto karinta ee doonta isaga oo sheegay in uu u diiday mid ka mid ah burcada inuu siiyo mindi uu ku dillo dadka la haystay
Dhawaan ayay ahayd markii Maxkamada Gobolka Norfolk ay xukuntay Soomaali loo haysto Toogashada Dadka Mareykanka ee Sannadkii hore 2010